निगमको उडानबारे मन्त्रालय नै बेखबर ! - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
निगमको उडानबारे मन्त्रालय नै बेखबर !
काठमाडौं, २८ जेठ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जापानको साका उडान गर्ने योजना डेढ महीना पछि धकेलिएको छ । निगमले आगामी असार १९ गतेदेखि काठमाडौँ–ओसाका सिधा उडान गर्ने योजना बनाएको थियो ।
तर टिकट बुकिङ कम भएको र पर्यटकीय सिजन प्रतिकुल रहेको भन्दै निगमले निर्धारित उडान तालिका परिवर्तन गरी आगामी भदौ १२ गते (२९ अगष्ट २०१९) देखि नियमित उडान गर्ने तयारी गरेको छ ।
पर्याप्त यात्रु नभएकाले ओसाका उडान तालिका परिवर्तन गरिएको निगमका सहायक प्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिए । उनले भने, “जापानबाट उडान अनुमति पाएपछि आवश्यक तयारीका साथ टिकट बुकिङ खोलियो, एक महीनाको अवधिमा पाँच/सात जना मात्र यात्रु भए, पर्यटकीय सिजन सकिएको र जापान जाने विद्यार्थीले पहिले नै अन्य एयरलाइन्सको टिकट लिइसकेकाले पनि यात्रु कम भएको हुनसक्छ । अब मनसुन सकिएपछि भदौ १२ गतेदेखि ओसाका उडान गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।”
सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सिसँग पनि छलफल गरी उनीहरुको सुझावका आधारमा उडान केही पर सारिएको निगमको भनाइ छ । यता ओसाका उडान सरेको विषयमा नियामक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नै बेखबर छ । मन्त्रालयले के कति कारणले निर्धारित उडान स¥यो भनेर ताकेता पनि गरेको छैन । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले निगमको ओसाका उडानबारे अनविज्ञता प्रकट गरे। “जापानको ओसाका उडान सरेको बारे पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाए । निगम भित्र के हँुदैछ, राम्रोसँग बुझ्न पाएको छैन, सञ्चालक समितिमा पनि यो विषय छलफल भएको छैन”, उनले भने ।
निगमको ओसाका उडानबारे मन्त्रालय र सञ्चालक समितिलाई जानकारी नगराइएकाबारे सहायक प्रवक्ता कोइरालाले निगमको निर्णयबारे अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराइएको स्पष्ट पारे । निगमले वाइड बडी ए–३०३० जहाजमार्फत लामो गन्तब्यमा उडान भर्ने योजनाका साथ जापानका विभिन्न गन्तब्यमा उडानका लागि पहल गरेको थियो । शुरुमा अप्रिल महीनामा उडान गर्ने गरी जापान सिभिल एभिएसन ब्यूरो (जेक्याब) सँग उडान अनुमति मागेको थियो तर अनुमति पाउन सकेन ।
पछि जुलाई ४ का लागि उडान अनुमति पायो । त्यसअनुरुप आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको थियो । टिकट बुकिङ खुलायो । एक महीनाको अवधिमा काठमाडौँदेखि ओसाका दुवैतर्फ जम्मा पाँचदेखि सात सिट मात्र बुकिङ भयो । उसैपनि घाटा बेहोरिरहेको निगमले थप घाटा खाने गरी तत्काल उडान नगर्ने निर्णय ग¥यो । जापानसहितका अन्य लामा गन्तब्यमा निगमका वाइड बडी उडानबारे अझै अन्यौलता रहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीलाई निगमका लामा गन्तब्यमा उडान भर्नेबारे प्रष्ट धारणा छैन । अनेकौ चुनौतीको सामना गर्दा गर्दै पनि निगमले आफ्नो व्यावसायिक योजनालाई भने निरन्तरता दिएको छ । उसले जापानसँगै चीन, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरियालगायत गन्तब्यमा उडान भर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ–जापान उडानको समयावधि छ घण्टाकोे छ भने ओसाका–काठमाडौँ साढे सात घण्टाको उडान हुनेछ । निगमले अहिले भारतको नयाँ दिल्ली, बैङ्लोर, मुम्बई, मलेसिया, सिङ्गापुर, बैंकक र कतारमा उडान भर्दै आएको छ । निगमसँग अन्तरर्राष्ट्रिय उडानका लागि हाल दुई वाइड बडी ए–३३० जहाज, दुई न्यारो बडी ए–३२० जहाज र एक बोइङ ७५७ जहाज छन् । रासस
Previousविज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन विरुद्ध परीक्षार्थी सडकमा
Nextभारतीय वायुसेनाको विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला